निर्मलाको शव भेटिएकै ठाउँतिर एक्टिभेट मोबाइलको म्यासेज: 'त्यो केटी छाड्देऊ, त्यो भन्दा राम्री मिलाइदिन्छु।' (#WhoKilledNirmala शृङ्खला १०)
4th December 2018, 05:33 pm | १८ मंसिर २०७५
'आज निर्मला घरमा छैन, भोलि कल गर्नू।'
निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यापछि सम्भावित अपराधीको 'क्लु' खोजिरहेको स्थानीय प्रहरीलाई सघाउन काठमाडौँबाट सिआइबीको टोली खटिएको थियो। टोलीले टेक्निकल पार्टमा पनि सघाइरहेको थियो।
घटनास्थल वरपरका एनसेल र नेपाल टेलिकमका टु जी र थ्री जी दुवै टावरमा ठोक्किएका सबै मोबाइल नम्बरहरुको अनुसन्धान जारी थियो - कुन नम्बरबाट कति बेला, कुन नम्बरमा, कुन ठाउँबाट फोन गरेको थियो? एसएमएसहरु स्क्रिनिङ भएका थिए।
ती युवतीले कसलाई 'निर्मला घरमा नभएको र भोलि कल गर्नु' भनेकी हुन्? निर्मलाको बारेमा जानकारी दिनुपर्ने कारण के थियो?
'रिसइबी साँध्ने त सौता हो, तर उनीहरु अहिले इन्डियामा छन्।'
महेन्द्रनगरको धर्नास्थलमा हामीसँग कुरा गर्दै यज्ञराजले भनेका थिए, 'फर्केर आउँदा गड्डाचौकी बोर्डर कट्ने बित्तिकै यो (कान्छी श्रीमतीलाई देखाउँदै) रुन थाली।' अहिले पनि नेताहरु भेट्न आउँदा आमाभन्दा कान्छी आमा बढी रोएको दृश्य युट्युबमा भेटिन्छन्।
'८० प्रतिशतभन्दा बढी बलात्कारका घटना चिनजानकै मान्छेबाट हुन्छ र चिन्ने डरले हत्या गर्छ' यो तथ्यबाट निर्देशित भएर आफन्त र चिनजानका मानिसबाटै अनुसन्धान गरी केही 'क्लु'को खोजी गरिरहेको थियो, प्रहरी।
'तपाईँका बारेमा हामीले सबै बुझेका छौँ। तपाईँ निर्मलाको परिवारसँग धेरै वर्षदेखि सँगै बस्नुहुँदो रहेनछ, नत्र हामी तपाईँबाटै पनि अनुसन्धान गर्थ्यौँ। किनभने बाउले छोरीलाई 'रेप' गरेका धेरै घटना पनि छन्। तर पनि तपाईँलाई कसैमाथि शंका लाग्छ भने भन्नुस्। कोही आफन्त, साथीभाइले शंकास्पद व्यवहार गर्थ्यो भने भन्नुस्। छोरीको कुनै ब्वाइफ्रेन्ड थियो भने नलुकाउनुस्, तपाईँहरुले सबै भन्नुपर्छ अनि अनुसन्धानमा सहज हुन्छ,' यज्ञराजलाई अनुसन्धान गर्नेहरुले पटकपटक सोधेका थिए।
आमाको मोबाइलको कल डिटेल हेर्दा 'आज निर्मला घरमा छैन, भोलि कल गर्नू' भनेर एसएमएस पठाउने सपना*सित पनि सम्पर्क भएको देखियो।
'तपाईँ मोबाइल बोक्नु हुन्छ?'
प्रहरीले उनले बोक्ने गरेको मोबाइलको आइएमइआई नम्बरमा कुन कुन सिम एक्टिभ भएको छ भन्ने डिटेल खोज्छ। र, अर्को आश्चर्यजनक तथ्य फेला पर्छ - सपनाको त्यो मोबाइलमा एउटा हैन, १६ वटा सिम एक्टिभ भएको देखिन्छ। त्यो पनि छोटो समयको अन्तरालमै।
'त्यो केटी छाड्देऊ। त्यो भन्दा राम्री मिलाइदिन्छु।'
ढिलै सही, उनले १६ वटा सिम प्रयोग गरेको पनि स्वीकार गर्छिन्। 'निर्मला आज घरमा छैन, भोलि कल गर्नु' भनेर पनि आफूले नै म्यासेज गरेको पनि बताउँछिन्।
तर, नाम निर्मला भए पनि थर अर्कै भएकी सपनाकी साथीसित मोबाइल रहेनछ। तिनले सपनाकै मोबाइलबाट आफ्नो ब्वाइफ्रेन्डसँग कुरा गर्दी रहिछिन्। त्यही साथीले भने अनुसार उनले उसको ब्वाइफ्रेन्डलाई एसएमएस गरेर 'निर्मला आज छैन भोलि कल गर्नु' भनेको बताइन्।
सपनाले भनेको केटालाई झिकाएर सोधपूछ गर्दा उसको कुरा सत्य साबित हुन्छ। सपनाका शङ्कास्पद व्यवहार, संयोग मिल्न गएको म्यासेज र परिवार समेतलाई 'मोबाइल बोक्दिनँ' भन्ने झुटले उनी पनि शंकाको घेरामा परिन्। फरक थरकी निर्मलामात्र होइन, सपनाले एकै पटक ८ जना युवकसँग 'प्रेम' सन्देश आदानप्रदान गरेको तथ्य पनि उनकै मोबाइलको एसएमएसहरुबाट फेला पर्‍यो।
पाँच दिनको अनुसन्धान पछि सपना प्रहरी शङ्काको घेराबाट बाहिरिइन्। र, उनीसँगै भेटिएको एउटा 'क्लु' र शंका समाप्त भयो।